Kedụ uru dị n'ịzụrụ ihe ndị YouTube kwuru?
Meziwanye ọkwa Nchọgharị nke vidiyo gị
Gbaa ndị ọzọ ume ịza ajụjụ na vidiyo gị
Na-agba Mkparịta toka ịmalite
Anyị na-enyocha vidiyo gị ma dee nkọwa dị mma
You Puru Inye Nkwupụta nke Gị Ma Ọ Buru N’iru
A na-ekesara ihe n ’ọtụtụ ụbọchị
Nkwupụta amalite na Oge 24-72
Ụzọ ịzụta nkọwa YouTube nwere ike inyere ọwa gị aka ka ọ bụrụ ewu ewu
N'oge ugbu a, a na-ewere YouTube ka otu n'ime ọrụ mgbasa ozi vidiyo a na-ejikarị eme ihe n'ụwa. Ọ nwetala uto dị egwu kemgbe ọtụtụ afọ wee bụrụ ebe kachasị amasị maka ikenye na ikiri ọdịnaya vidiyo. Ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ịchịkọta ọnụ ọgụgụ dị mma nke ndị na-eso ụzọ enwetawokwa uru ego na ya. Ya mere, o doro anya na YouTube na-abịa na ọtụtụ uru. Ntuziaka na-esonụ ga-enyere gị aka n'ịwulite ọwa YouTube na-aga nke ọma na ịnweta uru ndị ọzọ na ya.
Iji wuo ọwa na-aga nke ọma, nzọụkwụ mbụ ị ga-eme bụ iwulite ntọala ndị na-ege ntị siri ike. Ndị na-ege ntị, nke a maara dị ka ndị debanyere aha na YouTube, ga-ewetara ọwa gị ọhụụ karịa site na ịmasị vidiyo ndị ahụ, ịza ajụjụ na ha, na-ezo aka na ndị enyi ha. Ọ dị mkpa itinye aka na ntọala ndị debanyere aha gị ma gee ha ntị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọwa gị bụrụ onye a ma ama. Azịza ya dị oke mkpa maka ọganiihu nke ọwa gị. Ị nwere ike zụta ihe YouTube site na YTpals ma jiri usoro ndị a na njikọ njikọ ndị debanyere aha gị na ngalaba nkọwa.
Gịnị bụ mkpa atụmatụ azịza dị irè?
YouTube abụghị naanị maka ikiri vidiyo, ebe ọ na-enye ohere ka ndị mmadụ na-emekọrịta ihe na ngalaba nkọwa. Azịza bụ ụzọ dị mma maka ndị na-emepụta ọdịnaya iji soro ndị na-ege ha ntị na-akpakọrịta yana ọzọ. Ọ na-enye ndị na-emepụta ọdịnaya ohere ige ntị n'ihe ndị debanyere aha ha nwere ikwu gbasara ọdịnaya. Akụkụ nkọwa na YouTube na-ekere òkè dị ukwuu n'iwulite mmekọrịta na ndị na-ege ntị. Vidiyo nwere nkọwa ndị ọzọ na-enwekarị nlele. Achọpụtala na ọtụtụ vidiyo nwere ihe dị ka ihe dị ka puku kwuru 5,000 ma ọ bụ karịa na-enwe ike ị nweta ihe ruru nde 1. Echiche na nkọwa na-aga n'ihu na aka, dịka mmụba nke otu na-eduga na mmụba nke ọzọ.
Mgbe ịmalite ọwa YouTube, ebumnuche bụ isi bụ ịbawanye nhụta gị n'ofe ikpo okwu. Nkọwa bụ ihe na-akpali akpali maka ịba ụba visibiliti. Ihe ndị a kwuru nwere ike ime ka ndị na-ekiri ha lelee vidiyo ahụ dum, lelee vidiyo ahụ ma kesaa ya n'etiti ezinụlọ na ndị enyi ha. Usoro nkọwa dị irè abụghị naanị mkpa maka inweta echiche kamakwa maka iduzi ndị na-ekiri ka ha nweta ọtụtụ ọdịnaya gị. Usoro nkọwa dị mma na-enyekwa gị ohere ịkwalite ozi ịchọrọ izipu site na ọwa gị.
Atụmatụ maka ịkwọba nkọwa ndị ọzọ na vidiyo YouTube gị
Nkwupụta nwere ike ịbara uru nke ukwuu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta nzaghachi ozugbo site na ndị na-ekiri gị wee mepụta mkparịta ụka gburugburu vidiyo gị. Ugbu a ị ghọtara mkpa atụmatụ ịza ajụjụ dị irè, ka anyị leba anya n'ụfọdụ ụzọ enwere ike iji kpalite nkọwa ndị ọzọ na vidiyo gị. Ị nwere ike iji ọnụọgụ ọ bụla n'ime ụzọ ndị a iji mepụta atụmatụ nkọwa nke gị. Ị nwekwara ike ịzụta ihe YouTube iji nyere aka na usoro a.
1. Jụọ ajụjụ na njedebe nke vidiyo.
Ịkwesịrị ịgbalị mgbe niile ịjụ ajụjụ ụfọdụ n'aka ndị na-ekiri gị na njedebe nke vidiyo. Ajụjụ ndị a nwere ike ịbụ ndị mepere emepe, agbanyeghị, ajụjụ ndị akọwapụtara nke na-akpali ndị na-ekiri ịza ajụjụ ga-abara gị uru karịa na nke a. Ọ bụrụ na nke gị bụ vidiyo nkuzi, ị nwere ike ịjụ ndị na-ekiri ma ha hụrụ na ndụmọdụ ahụ bara uru ma ọ bụ na ọ bụghị. Ị nwekwara ike ịkpalite njikọ aka site n'ịjụ ndị na-ekiri ụdị ọdịnaya ha chọrọ ịhụ. Ị ga-enweta azịza ụfọdụ ekwe nkwa na ngalaba nkọwa. Ọ bụghị naanị na ị ga-enweta ụfọdụ ọmarịcha echiche maka vidiyo n'ọdịnihu, mana ị ga-enwekwa ike jikọọ na ndị debanyere aha gị na ọkwa nkeonwe.
2. Kwuo okwu mbụ na ngalaba nkọwa.
Mgbe ụfọdụ, ụzọ kacha mma isi gbaa ndị na-eso ụzọ gị ume ka ha biputekwuo nkọwa bụ site n'ịza ajụjụ mbụ n'onwe gị. Ị nwere ike bute ụzọ wee bipute okwu na-etinye ndị debanyere aha wee malite mkparịta ụka gbasara vidiyo ahụ. Ka oge na-aga, ndị debanyere aha gị ga-enwe ahụ iru ala karịa ịza ajụjụ na vidiyo gị. Ụzọ ọzọ ị ga-esi jiri otu atụmatụ ahụ mee ihe bụ site n'ịjụ onye ị maara n'onwe ya ka ọ zaa ajụjụ. Atụmatụ nkọwa a na-arụkwa ọrụ nke ọma. Okwu ndị enyi na ezinụlọ biputere ga-agbakwa ndị debanyere aha ha ume ka ha bipụtakwuo nkọwa. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike iwulite obodo dị n'otu nke na-emekọrịta ihe kwa ụbọchị.
3. Lelee ọdịnaya kachasị na-arụ ọrụ iji ghọta njikọ aka.
Ị nwere ike iji nyocha YouTube chọpụta vidiyo ndị kacha hụtụrụ aka. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịchọpụta ihe ndị na-eduga na ntinye aka ka ukwuu. Ma ọ bụ ogologo vidiyo ma ọ bụ ndepụta ọkpụkpọ ụfọdụ. Achọpụtala na vidiyo ndị dị mkpụmkpụ karịa nkeji 2 na-enwekarị ọnụego ntinye aka n'ozuzu, ma e jiri ya tụnyere vidiyo nkeji ise. Ozugbo ị chọpụtachara ihe ndị na-eme ka vidiyo gị rụọ ọrụ nke ọma, ị nwere ike ịmegharị ha na vidiyo ọhụrụ gị. Nke a ga-eme ka ndị na-ege ntị na-etinye aka na nkọwa ga-anọgide na-abịa.
4. Jide asọmpi na YouTube.
Dị ka asọmpi Instagram na Facebook, ị nwekwara ike ijide asọmpi na YouTube, iji kwalite ntinye aka maka ọwa gị. Asọmpi YouTube bụ ụzọ dị mma iji nweta azịza, ndị debanyere aha na mmasị na vidiyo gị, ha niile n'otu oge. Agbanyeghị, ị ga-achọ ego mgbakwunye ma ị ga-etinyekwa nnukwu mbọ iji kwalite asọmpi ahụ. Asọmpi YouTube bụ ụzọ dị mma isi dọta uche ụfọdụ na ọwa gị, nke ga-eme ka ị nwetakwuo nkọwa na vidiyo gị n'ikpeazụ. Ị nwekwara ike ịgba ndị na-ekiri gị ume ka ha bipụta okwu dịka akụkụ nke asọmpi ahụ.
5. Obi ndị debanyere aha 'kwuru.
Ị nwere ike jikọọ na onye debanyere aha gị n'ọkwa nkeonwe site na ịmasị ihe ndị ha biputere n'okpuru vidiyo gị. Mgbe ịchọrọ ikwu okwu, ndị na-ekiri ga-enwe ike ịhụ obi na-acha uhie uhie yana obere akara ngosi nke ọwa gị n'akụkụ ya. Onye tinyere nkọwa ahụ ga-enwetakwa ọkwa na ihe ha kwuru nwere mmasị na ya. Ozugbo ndị na-ekiri gị hụ ka gị na ndị ọzọ na-akpakọrịta na nkwupụta, a ga-agba ha ume ka ha biputekwuo nkọwa. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike iwulite nkwado ndị fan ma gosikwa na ị nwere ekele maka ndị na-ekiri gị.
6. Kpọọ nkọwa ụfọdụ.
Pinning bụ nnukwu ụzọ ị nwere ike isi gosipụta nkọwa ụfọdụ. Ọ na-achọpụta na nkọwa nke etinyere bụ okwu mbụ ndị na-ekiri gị na-ahụ n'okpuru vidiyo gị ka ha na-atụgharị na ngalaba nkọwa. Ị nwere ike tinye nkọwa nke gị ka gị na ndị na-ekiri kparịta ụka ma ọ bụ kpanye okwu ndị debanyere aha. Njirimara pinning dị mma maka -
Ịjụ ndị na-ege ntị ajụjụ kpọmkwem.
Inye nkọwa gbasara vidiyo ahụ.
Iji akwa ista ma ọ bụ ihe mmepe ụfọdụ na-akparị ndị na-ege ntị.
Na-ekele ndị na-ekiri ya maka ikiri vidiyo.
Gosipụta okwu ndị dị mkpa sitere n'aka ndị debanyere aha.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ nke ọ bụla n'ime ọwa kacha arụ ọrụ na YouTube, ị ga-ahụ otu ihe na-emekarị n'etiti ha - nkwụsi ike. Iji kwalite njikọ aka maka ọwa gị, ị ga-emelite mgbe niile ma bipụta vidiyo ugboro ugboro. Ọ dị mkpa ịgbaso usoro nhazi siri ike ka ndị na-ekiri mara mgbe ị ga-ebugo vidiyo gị ọzọ. Agbanyeghị, nke a pụtara na ị ga-ewepụta ọdịnaya maka ebumnuche ya. Ọbụlagodi na usoro gị na-ekesa otu vidiyo kwa izu, ọ dị mkpa ime ka ọdịnaya na-adọrọ mmasị ndị na-ege ntị. Ọ bụrụ na ndị na-ekiri ahụ na-ahụ vidiyo gị na-adọrọ mmasị na nke pụrụ iche, mgbe ahụ ga-anọgide na-ebipụta nkwupụta.
8. Gụnye CTA
Ọ dị mkpa itinye oku ime ihe (CTA) na vidiyo ọ bụla. Enwere ike itinye nke a n'akụkụ ọ bụla nke vidiyo, ma mmalite, etiti njedebe. Ebumnuche bụ isi nke CTA bụ ịrịọ ndị mmadụ ka ha denye aha na ọwa gị. Ị nwere ike iji njirimara nkọwa wee tinye obere igbe dị n'elu akụkụ aka ekpe nke ihuenyo, na-arịọ ndị na-ekiri gị ka ha denye aha na ọwa gị. Mgbe ndị na-ekiri ha na-ahụ CTA site n'oge ruo n'oge, a ga-echetara ha ka ha denye aha na ọwa gị. Ka ị na-enweta ndị debanyere aha, nkọwa na mmasị ga-abawanye na-akpaghị aka maka vidiyo gị.
9. Jiri wijetị YouTube na blọọgụ na weebụsaịtị gị
Ụzọ ọzọ dị mma isi mee ka itinye aka na ọwa YouTube gị bụ itinye wijetị YouTube na blọọgụ ma ọ bụ weebụsaịtị gị. Wijetị YouTube ga-abụ ụzọ dị mma isi webata ndị debanyere aha ọhụrụ ka ndị na-eso blọgụ gị na ndị ọbịa webụsaịtị ga-amata maka ọwa YouTube gị. Ọ bụrụ na ha na-agbaso ọdịnaya gị na usoro ndị ọzọ, ha nwere ike ịdebanye aha na ọwa YouTube gị. Nke a ga-enye ha ohere biputere nkọwa na ọwa YouTube gị ka ha ga-enweta ohere iso gị na-akpakọrịta na ọkwa nkeonwe.
10. Mee netwọkụ
Ọ bụrụ na onye debanyere aha nwere mmasị na ọwa gị, enwere ohere na ha nwekwara ike ịmasị ọwa ndị ọzọ metụtara ya. YouTube na-enye ndị okike ohere ịgbakwunye ọwa YouTubers ndị ọzọ na ibe nkwado. N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike ịrịọ ọwa ndị ọzọ metụtara ka ha gosipụta ọwa gị na ibe ndụmọdụ ka ndị na-ekiri ha wee kpalie ịdenye aha na ọwa gị. N'ụzọ dị otu a, ị ga-enwe ike ị nweta ọtụtụ nlele, ndị debanyere aha na nkọwa maka ọwa gị.
11. Mmekọrịta na ndị debanyere aha.
Nke a dị ka atụmatụ doro anya, na ịza ajụjụ nke ndị debanyere aha gị ga-adọtakwu nkọwa. Mgbe ị zara ajụjụ ndị na-ekiri ya, ọ na-agakwa igosi na ị na-ege ha ntị nakwa na ị nwere mmasị na nzaghachi ha. Ịkwesịrị iwepụta nkeji ole na ole kwa ụbọchị ka gị na ndị na-ekiri gị na-akpakọrịta. E wezụga ịza ajụjụ na ọwa gị, ọ ga-abụ ihe dị mma ka gị na ndị na-ekiri na-emekọrịta ihe na ngalaba nkọwa ọwa ndị ọzọ metụtara ya. Ọ bụrụ na ndị na-ekiri ndị a na-ahụ na okwu gị na-atọ ụtọ, ha ga-agbalịkwa ịga na profaịlụ gị. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike nweta ndị debanyere aha ọhụrụ.
12. Jiri Keywords rụọ ọrụ nke ọma.
Iji isiokwu dị na vidiyo eme ihe nke ọma dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite njikọ aka ziri ezi na ọwa YouTube gị. A na-eji isi okwu eme ihe mgbe mmadụ na-achọ ihe karịsịa. Ọ bụrụ na ị na-eji mkpụrụokwu ziri ezi, ohere vidiyo gị ga-erute onye nlele ziri ezi na-abawanye. Achọpụtala na ihe karịrị 60% nke ndị debanyere aha ọhụrụ na ọwa na-abịakarị site na nhọrọ ọchụchọ YouTube. Ọ bụrụ na ijighị mkpụrụokwu ziri ezi ma ọ bụ mkpụrụokwu gị gbasapụrụ dị gịrịgịrị, vidiyo gị nwere ike ọ gaghị apụta na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ dị mkpa ka ọ bụrụ nkọwa dịka o kwere mee mgbe ị na-emepụta mkpado isiokwu. Ị nwekwara ike iji ngwaọrụ dị n'ịntanetị ịchọta ntụnye maka mkpụrụokwu.
13. Nkwalite ọwa.
Ọ dị mkpa ịkwalite ọwa gị ọ bụghị naanị na YouTube kamakwa na mpụga ya. Nke a ga-emeghe ọwa YouTube gị maka ndị na-ekiri si na usoro dị iche iche. Ka ha na-amalite iso ọdịnaya vidiyo gị, ha ga-amalite ịza ajụjụ, ịkekọrịta na masịrị vidiyo gị. Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ ị nwere ike isi zụọ ọwa YouTube gị -
Jikọọ ọwa YouTube gị na ibe mgbasa ozi mmekọrịta gị.
Nyefee ọwa YouTube na webụsaịtị ibe edokọbara ọha.
Tinye ọwa na igwe nchọ vidiyo.
Tinye njikọ na ọwa YouTube gị na listi nzipu ozi.
Jiri URL YouTube gị mgbe ị na-ekesa nkọwa na blọọgụ na ndị dị otú ahụ.
14. Jiri thumbnails na-adọrọ mmasị maka ọdịnaya vidiyo gị
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọta ndị debanyere aha ọhụrụ ọ dị mkpa ka obere mkpịsị aka gị pụta ìhè. O yikarịrị ka ndị mmadụ ịpị vidiyo gị ma ọ bụrụ na ha na-ahụ thumbnail ahụ na-akpali mmasị. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ịmalite iji onyonyo clickbait dị ka thumbnail gị. O yighị ka ndị na-ekiri ga-eso ọwa gị ma ọ bụrụ na ị na-eji atụmatụ clickbait. Ebumnuche bụ isi nke itinye thumbnail na-atọ ụtọ bụ ịbawanye echiche ị na-enweta. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye ndị na-ekiri ihe dị mma, echiche ndị ahụ ga-eweta nkwupụta na mmasị.
15. Jiri akụkụ ọhụrụ nke nzacha okwu gị
Ihe ọhụrụ dị na YouTube Studio (desktọpụ) na-enye gị ohere inyocha ihe ndị dị na ọwa gị. Ị nwere ike iji nke a chọọ nkọwa ụfọdụ wee mezie ọchụchọ ahụ, dabere na -
Ọnọdụ onye debanyere aha.
Ọnọdụ onye otu ọwa.
Nọmba ndenye nke onye kwuru.
Ị nwekwara ike iji nzacha leba anya n'ihe nwere ajụjụ ụfọdụ ka ị nwee ike ịza ha ngwa ngwa. E wezụga nke a, ị nwere ike iji njirimara a nyochaa nkwupụta ị nwere ma ọ bụ ịzaghachighị.
N'ikpeazụ, ị nwere ike ịzụta ihe YouTube sitere na YTpals. Ịzụta ihe YouTube nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ maka ndị malitere njem YouTube ha, n'ihi na ụfọdụ ndị na-ekiri nwere ike ịla azụ na mbụ biputere nkwupụta na vidiyo na-enweghị nkọwa. Nke a bụkwa nhọrọ dị mma maka akaụntụ ndị eguzobere, ebe ị na-eji atụmatụ ndị a kpọtụrụ aha ma zụta ihe YouTube iji nyere gị aka na usoro a.
Kedu ihe kpatara ị ga-eji zụta nkọwa YouTube?
Ugbu a ị maara usoro nke ịba ụba ọnụ ọgụgụ okwu na ọwa gị, ọ bụ oge ileba anya na mkpa ọ dị ịzụ ihe YouTube. Enwere asọmpi siri ike na mgbasa ozi ọha na eze taa, ọ ghọwokwa ihe siri ike inweta ewu ewu site na ọwa mgbasa ozi dịka YouTube. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ ndị ama ama ama ama na-atụgharị na nyiwe dị ka YouTube imepụta ọdịnaya. Nke a bụ ya mere o ji dị mkpa imeziwanye atụmatụ ma chọọ ụzọ ọhụrụ iji chụpụ njikọ aka n'aka ndị na-eso ụzọ.
Ọ bụrụ na ị zụta ihe YouTube site na ndị na-enye ọrụ dị ka YTpals, ị ga-enwe ike ịkwalite ọganiihu nke ọwa gị. Ka anyị lelee ụfọdụ uru dị n'ịzụta nkọwa YouTube.
1. Mụbaa nnabata nke vidiyo gị.
Ị nwere ike nweta uru dị iche iche nke YouTube naanị mgbe ha nwetachara amara n'aka ndị na-ekiri ya. Mgbe ịzụrụ nkọwa YouTube, enwere ike ịmata vidiyo gị na-abawanye. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime nke ọma na YouTube, vidiyo gị kwesịrị ịnweta ndị debanyere aha zuru oke, mmasị na nkọwa. Ịzụta nkọwa na-eme ka ọrụ ahụ dịkwuo mfe, n'ihi na ọtụtụ nkọwa na-akpalikwa echiche na mmasị ndị ọzọ. N'agbanyeghị na vidiyo gị nwere ike ọ gaghị enweta otu nkwupụta nke ndị na-eme ememme YouTube na-enweta, ịzụrụ nkwupụta YouTube na-abawanye nnabata nke ọwa gị n'anya ndị na-ekiri ya.
2. Mụbaa ọkwa nke ọwa YouTube gị
Na YouTube, ọkwa nke ọwa na-ekpebikarị site na ọnụọgụ ndị debanyere aha ọwa nwere. Onye debanyere aha nwere ike ịdịgasị iche dabere na ọnụ ọgụgụ nke nkọwa na mmasị na vidiyo ọ bụla. Nke a bụ ya mere mmụba nke ọnụ ọgụgụ mmasị na nkọwa na-eduga n'ịbawanye ogo nke ọwa na YouTube. Nke a na-egosi eziokwu na nkọwa dị oke mkpa maka ọganiihu nke ọwa YouTube. Mgbe ịzụrụ nkọwa YouTube, ị nwere ike ịbawanye ọkwa nke ọwa gị site na ịbawanye ohere ịnweta ndị debanyere aha.
3. Mee ka vidiyo gị bụrụ nje
Onye ọ bụla YouTuber chọrọ ka ọdịnaya ha ga-efe efe, agbanyeghị, ọ nweghị usoro edobere maka ime nke ahụ. Iji mepụta ọdịnaya viral, onye okike ga-etinye oge dị ukwuu ma kwalite ya na usoro dị iche iche iji mepụta mkpọtụ gburugburu vidiyo. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ụzọ ọkụ iji nweta nje, ịzụ ihe YouTube nwere ike inye aka na usoro a. Ozugbo ịzụrụ nkọwa YouTube, a ga-eme ka ndị mmadụ pụta ìhè vidiyo gị. Ka ọtụtụ ndị mmadụ na-agbanye vidiyo gị, nkọwa ndị ọzọ ga-anọgide na-abata. Ngalaba nkọwa bụ ihe mbụ ndị na-ekiri na-ele anya, ọbụna tupu ịdebanye aha na ọwa. Yabụ inwe ngalaba nkọwa dị egwu site n'ịzụta nkọwa ga-enyere gị aka na-adọta ndị na-ekiri.
4. Nweta ọtụtụ clicks na mmasị
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọwa gị bụrụ nke ewu ewu na YouTube, ọ dị mkpa ka ọ nwetakwuo pịa, nkọwa na mmasị. Usoro ime ka ndị mmadụ lelee vidiyo gị nwere ike ịdị ogologo ma na-agwụ ike. Otú ọ dị, e nwere ụzọ ị nwere ike isi mee ka usoro ahụ sie ike. Otu n'ime ụzọ kachasị mma isi malite ewu ewu gị bụ site n'ịzụta ihe YouTube. Ozugbo ịzụrụ nkọwa na YouTube, echiche na mmasị ga-abanye na-akpaghị aka ka ọtụtụ ndị na-amalite ịpị vidiyo gị. Nke a bụ n'ihi na ọnụ ọgụgụ dị mma nke nkọwa na vidiyo gị na-eme ka ohere ha pụta na nsonaazụ ọchụchọ.
5. Dọrọ ndị debanyere aha ọhụrụ
Ihe kachasị mkpa na YouTube bụ ndị na-ekiri na ndị debanyere aha. Atụmatụ gị niile bụ n'ikpeazụ iji dọta ọtụtụ ndị na-ekiri na ọwa gị. Ọ bụ eziokwu a maara nke ọma na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ekiri na ndị debanyere aha ị nwere na ọwa gị, ka ndị na-ekiri gị ga-enwe ike ịdọrọ. Ọnụọgụ nkọwa na vidiyo gị na-ekpebikwa ọnụọgụ nlele ị ga-emecha nweta. Ịzụta nkwupụta sitere na YTpals nwere ike inye aka na usoro a ma ọ nwere ike ime ka ọrụ gị dịkwuo mfe. Ị ga-enwe ike ịdọta ndị debanyere aha ọhụrụ ka ndị na-ekiri na-eleta ọwa gị na-edeba ọnụ ọgụgụ okwu ị nwere na ọwa gị.
6. Na-enyere aka n'ịmepụta ihe akaebe ọha na eze
Ihe akaebe ọha na eze dị oke mkpa na ụwa mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ bụ ihe a maara nke ọma na ndị mmadụ na-aṅa ntị na ọwa ndị nwere ụfọdụ ọnọdụ ọha mmadụ. Mgbe ọnụ ọgụgụ dị mma nke ndị na-ekiri tụkwasịrị obi echiche ma ọ bụ echiche ọwa YouTube gị na-agbasa, ndị na-ekiri ọhụrụ ga-abanye na akpaghị aka. N'ihi ihe akaebe nke ọha mmadụ, ndị na-ekiri ọhụrụ a ga-enwe mmasị karị ịgbatị nkwado ha na ọwa. Ị nwere ike ịzụta ihe YouTube iji mepụta ihe akaebe ọha na eze na saịtị ahụ. Ozugbo ndị na-ekiri hụrụ ihe ndị a na vidiyo gị, ha ga-enwe mmasị ilebawanye ọdịnaya gị.
7. Wepụ ihe ndị na-adịghị mma
Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ nwere ike ịkwụsị ibipụta ọtụtụ okwu na-adịghị mma na nke ịkpọasị na vidiyo YouTube na-enweghị njikọ na ọdịnaya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji YouTube kwalite iro na ajọ mbunobi. Nke a bụ ebe ịzụrụ nkọwa YouTube ga-aba uru. Ị nwere ike ịkọ nkwupụta ndị a, agbanyeghị, ị nwekwara ike were ụzọ ọzọ iji mebie mkpọtụ ahụ. Mgbe ịzụrụ okwu YouTube, ị nwere ike ijide n'aka na okwu dị mma kpuchie okwu ndị a na-adịghị mma, nke nwere ike mebie vidiyo gị n'ikpeazụ. Nke a bụ nnukwu atụmatụ maka idobe trolls ịntanetị na njedebe na ha agaghị enwe ike nweta afọ ojuju site na nkwupụta asị.
8. Mepụta clout n'elu ikpo okwu
Mgbe ịzụrụ nkọwa YouTube, vidiyo gị ga-amalite inweta amara n'elu ikpo okwu. Ka ọtụtụ mmadụ na-amalite ikiri vidiyo gị, ọ ga-enye gị ohere ịkwalite ọnọdụ gị na oghere ahụ. Ọnụ ọgụgụ nlele ka ukwuu pụtara mmasị ndị ọzọ, nkọwa ndị ọzọ na ndị debanyere aha. Na ọtụtụ ndị debanyere aha na nkọwa na vidiyo gị, a ga-agbakwa ndị na-ekiri agbakwunyere ume ịdebanye aha na ọdịnaya gị wee bipute nkọwa. Usoro a ga-aga n'ihu ma ị ga-enwe ike iru elu n'oge adịghị anya. N'ihi ya, ị ga-enwe ike inwe mmetụta ụfọdụ n'elu ikpo okwu. Ọ bụghị naanị na ị ga-enweta uru ego site na YouTube, mana clout ga-enyere gị aka n'ịmepụta mmekọrịta ọhụrụ yana ịchọpụta ụzọ ndị ọzọ.
9. Ịmepụta nha nha nke nkọwa na echiche
Ọ bụrụ na ị zụtara echiche YouTube n'aka YTpals n'oge gara aga, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ịzụta ihe YouTube. Mgbe ndị mmadụ na-elele ọwa gị, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịhapụ nkọwa ụfọdụ. Ọ naghị egosipụta nke ọma na ọwa gị ma ọ bụrụ na agbanyụrụ oke n'etiti echiche na nkwupụta site na nnukwu oke. Ị nwere ike dozie ọnọdụ a site n'ịzụta nkọwa YouTube dabara na ọnụọgụ nlele ị nwere na vidiyo gị. Ka echiche gị na nkọwa gị na-ele anya nke ọma, a ga-agba ndị mmadụ ume ka ha soro ọwa gị wee hapụ nkọwa na mmasị na vidiyo ahụ.
10. Nweta ọtụtụ okporo ụzọ na weebụsaịtị nke gị
Ị nwere ike iji ihe ịga nke ọma nke ọwa YouTube gị na-ebuga okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke gị. Mgbe ịzụrụ ihe YouTube sitere na isi iyi a pụrụ ịdabere na ya dị ka YTpals, a na-enye ya na ị ga-enwe ike ịnweta mmasị, nlele na ndị debanyere aha. Ka ntọala ndị debanyere aha gị na-etolite, ị nwere ike iji mmetụta gị na saịtị ahụ iji kwalite okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọwa YouTube gị ga-enye gị ohere ikwado ndị nwere mmasị n'ụdị ọdịnaya ị na-emepụta.
Site na atụmatụ ndị ahụ e kwuru n'elu maka ịkwọ ụgbọ ala na vidiyo YouTube gị, ọ pụtara nke ọma ka okwu dị mkpa na oghere YouTube. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ n'elu ikpo okwu ma na-agbasi mbọ ike ịkpụpụta niche maka onwe gị, mgbe ahụ ị nwere ike irite uru na ọrụ Zụrụ YouTube Comments nke YTpals. Mgbe ịzụrụ ihe YouTube sitere na isi iyi a pụrụ ịdabere na ya dị ka YTpals, ị ga-enwe ike nweta uru niile ahụ e kwuru n'elu. YTpals na-enyocha vidiyo gị wee dee nkọwa dị mma dị elu. Ị nwekwara nhọrọ nke ịnyefe nkọwa nke gị. Ọrụ ahụ ga-amalite n'ime awa 24-72 nke itinye iwu ahụ, a ga-agbasa nkwupụta ndị ahụ n'ime ụbọchị ole na ole.
Agbakwunyela Comments YouTube na ụgbọ ibu gị.